विविध Archives - Aarati Patrika
दशकौंदेखि एकछत्र नेतृत्व !!
2018-09-01	Featured, News, कसले के भने ?, विविध Leaveacomment 184 Views
दशकौंदेखि एकछत्र नेतृत्व !! दशकौंदेखि नेपालका साना पार्टीहरु एकै व्यक्तिको वर्चस्व र स्वयंपाकी चौल्हाचौकायुक्त नेतृत्वभित्र खीरिटो अवस्थामा छन् । बढ्न पनि नसक्ने ः मर्न पनि नमर्ने ‘क्याक्टस फूल’ जस्ता । हुन पनि वीरेन्द्र पासवानको दलीत जनजाति पार्टीदेखि लिएर हरिचरण शाहको नेपाली जनता दल– एकनाथ ढकालजीको नेपाल परिवार दल (हुन त यो दल एमालेमा समाहित भयो पनि भनियो – तर अझै ...
‘म अघोरी कवि हुँ’
2018-08-30	News, विविध Leaveacomment 205 Views
‘म अघोरी कवि हुँ’ शनिबार २०७५ असार २३ को कान्तिपुर कोसेली परिशिष्टांकमा परमश्रद्धेय शताब्दी युगनायक राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले आफू उपचारार्थ भारतको हरियाणास्थित मेदान्त अस्पतालमा केही दिन रहेर स्वदेश फर्केको र प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीजी ग्राण्डी अस्पतालका डा.चक्रराज पाण्डेलगायत असंख्य मित्रवर्गको सहयोग, सद्भाव एवं शुभकामनाले आफ्नो उपचार सफल भएको र हाल घरैमा स्वास्थ्यलाभ लिइरहेको कुरा बताउनुभएको छ । ९९ ...
2018-08-22	Featured, News, कसले के भने ? Leaveacomment 116 Views
कसले के भने संसदीय सुनुवाइ पूर्वाग्रही भएकाले म अन्यायमा परे । मेरा सर्टिफिकेटको गलत प्रचार गरियो । वरिष्ठ न्यायाधीश दिपकराज जोशी (प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत उम्मेदवार) लोकमानसिंह कार्कीले आफ्नो पक्षमा मुद्दा जिताउने प्रयासस्वरुप तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रीमती सुशीला कार्कीलाई दश करोड रुपैयाँ घुस ‘पेश’ गरेका थिए । कांग्रेसी नेता दुर्गा सुवेदी (पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीजीका श्रीमान) हामीले राम्रा काम गरेका ...
म राजनीतिज्ञ मात्र हैन : लेखक पनि हुँ : मोहन वैद्य ‘किरण’ भन्नुहुन्छ–
2018-07-19	News, विविध Leaveacomment 163 Views
म राजनीतिज्ञ मात्र हैन : लेखक पनि हुँ : मोहन वैद्य ‘किरण’ भन्नुहुन्छ– स्कुलमा पनि मैले संस्कृत नै पढें । मेरा पिताजी पण्डित भएका कारणले उहाँबाट पनि मैले संस्कृत सिकें । दाङको संस्कृत महाविद्यालय, बिजौरीबाट मैले शास्त्री उत्तीर्ण गरें । पछि काठमाडौं आएर नेपाली भाषामा स्नातकोत्तर गरें । स्कुलको पढाइ सकेपछि पनि मैले दर्शन विषय पढें । त्यसक्रममा पनि संस्कृत ...
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा भन्नुहुन्छ–
2018-07-18	News, कसले के भने ? Leaveacomment 156 Views
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा भन्नुहुन्छ– अधिनायकवादी व्यवस्थामा नेतृत्व मात्र जोडिन्छ । ऊ हाँसेको राम्रो, उसले लगाएको जुत्ता राम्रो, टोपी राम्रो, उसले हेर्ने सिनेमा पनि राम्रो भन्ने मान्यताको विकास भएको हुन्छ । तर, तपाईंले भनेका नेतृत्वहरू अधिनायकवादी होइनन्, सर्वसत्तावादी हुन् । उदाहरणको रूपमा देउवाले अधिनायकवाद खोजे भन्दै कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिएका छन् । अधिनायकवाद त त्यो हो, जहाँ ...
अनुचित र खेदपूर्ण घटना !!
2018-07-16	News, विविध Leaveacomment 60 Views
अनुचित र खेदपूर्ण घटना !! उपकुलपतिजस्तो प्राज्ञिक र मर्यादित पदमा रहेका व्यक्तिमाथि भएको यस हर्कतले सरकारमा शक्ति उन्माद बढेको संकेत गरेको छ । प्रहरी राजको झल्को दिने यो कदमले विश्वविद्यालयको उच्च प्राज्ञिक पदको मात्रै अपमान गरेको छैन, लोकतन्त्र र विधिको शासनको पनि खिल्ली उडाएको छ । र, मुलुकभित्र–बाहिर स्वयं प्रधानमन्त्री अनि सरकारकै छवि धमिल्याएको छ । उपकुलपति प्रा. डा.कुलप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भेट्न ...